Ataovy mora ampiasaina ity: Ny lalàna 10 vaovao momba ny fifandraisana amin'ny krizy | Martech Zone
Ataovy mora ampiasaina ity: Ny lalàna 10 vaovao momba ny fifandraisana amin'ny krizy
Asabotsy, Aprily 11, 2015 Alahady 19 aprily 2015 Douglas Karr
Any Indiana no misy ny masoivohonay ary rehefa nandany ny kinovan'ny lalàna momba ny famerenana amin'ny laoniny ny fahalalahana ara-pinoana (RFRA) ny fahefana-maso dia nisy ny krizy taorian'izay. Tsy krizy nataon'ny governemanta fotsiny izany. Koa satria nisy fiantraikany teo amin'ny sehatry ny fandraharahana izany, dia nanjary krizy ho antsika rehetra manao raharaham-barotra ao amin'ny fanjakana. Indrindra rehefa nanomboka nitabataba ny sasany tamin'ireo mpitondra orinasa sasany tany ivelan'ny fanjakana ary nandrahona ny hanao ankivy ny fanjakana (mahavariana fa tsy nanao izany fandrahonana izany ho an'ireo firenena amidiny izy ireo izay nanaiky ny fanavakavahana sy ny tsy fisian'ny fahalalahana).
Ny fifandraisako amin'ny fanjakana dia milaza amiko fa ny fahefana manan-kery dia nampitandrina tanteraka fa hiditra amin'ny tafio-drivotra izy ireo ary tsy ilaina izany. Na manohana na manohitra ny lalàna ianao dia tsy maninona izany. Raikitra ny krizy - ary nikoropaka ny orinasa rehetra mba hiezaka ny hametraka ny raharaha. Izy io (ary mitohy hatrany), ny nofy ratsy.
Ny RFRA dia hetsika iraisan'ny maro an'isa ka tsy nisy fikarohana natao tamin'ny mpihaino, na koa nifandray tamin'ny orinasa na ny mpanjifa vokany.
Ny fikomiana ataon'ny orinasa taty aoriana dia mafy saingy tsy nampahafantatra marina fa ny ankamaroan'ny orinasa Hoosier, fa tsy ny vitsy an'isa voadona ihany, no nandà ny lalàna.
Ny vokany dia samy nanana krizy teny an-tànany ny antoko tompon'andraikitra sy ny mpanohitra. Ny antoko tompon'andraikitra dia voatery niverina avy hatrany tsy nisy safidy na safidy. Ny mpanohitra dia tsy maintsy nandamina sy nanandrana nanangana feo tokana izay nampita ny fandavan'izy ireo ny lalàna amin'ireo orinasa ivelan'ny fanjakana.
Ny haino aman-jery dia nitsambikina nanararaotra nanipy kitay tamin'ny afo ary tena nandrehitra ny afo. Noterena hamoaka ny fanambarantsika manokana ireo orinasa toa anay. (Tsy nangataka izahay na nanohana ny lalàna na dia eo aza ny fivavahako). Rivo-doza tonga lafatra izy io.
Angamba ny valiny tsara indrindra dia avy amin'ny Biraon'ny Ben'ny tanàna any Indianapolis, izay - na dia mpandala ny nentin-drazana aza dia nampita tamin'ny fomba mahomby ny feon'ny orinasa ao amin'ny faritra ary nametraka ny tenany tamim-pahombiazana teo amin'ny toeran'ny mpitarika noho ny an'ny governora. Fihetsika tsara io ary toa naharesy ny krizy sasany.
Ny mahatsikaiky amin'ity krizy iray manontolo ity, raha ny fahitako azy dia ireo tena Hoosier no nanakoako mafy ny fanoheran'izy ireo… ary avy eo ireo orinasa any ivelan'ny faritra dia nanomboka niresaka momba ny fanaovana ankivy an'i Indiana… sy ireo tena Hoosiers izay naneho ny fanoheran'izy ireo. Diso fanantenana aho amin'ireo orinasa any ivelan'i Indiana izay nitady handratra anay izay nandray andraikitra ary nanery ny mpitondra isam-paritra mba hanao fanovana eo noho eo.
Nanadinadina ahy i Ray Steele momba ny toe-javatra amin'ny WIBC:
Krizy mampalahelo tokoa. Ny antenaiko dia lesona avy amin'ny hubris azon'ny Governora io. Tsy isalasalana fa ho sitrana foana izy, ary misy antony marim-pototra.
The Ekipa mpitsikilo krizy Agnes + Day dia namolavola infographic izay mampiseho ny fitsipika vaovao manan-danja 10 amin'ny fifandraisana amin'ny krizy. Aza misalasala manonta azy ho an'ny ekipanao ary zarao amin'ny tamba-jotra.
Ny famakiana ny tsirairay amin'ireo lalàna etsy ambany dia azonao atao tsara ny mahita hoe nisy zavatra tsy nety tao Indiana.
Tags: agnes andropaomabenioffkrizyfifandraisana amin'ny krizyfitantanana krizyprectargetgreg ballardIndianamike penceprfifandraisana amin'ny vahoakaray steelerfrasalesforcewibc
Ireo refy roa amin'ny ecommerce vaovao tokony hojerenao
Torohevitra 5 haka ny bokinao ho an'ny orinasanao